Ulwimi lwe-GGL lokucoca umhlaba ngokufumaneka kwi-gvSIG-Geofumadas
NgoSeptemba, 2011 GvSIG, ezintsha
gvSIG isandula ukupapashwa, ethe ngenxa yehlobo likaGoogle leKhowudi kwiprojekthi ye-gvSIG, iplagi ye-gvSIG ye-GGL sele ikhutshiwe.
I-GGL lulwimi oluthile lwenkqubo yokusetyenziswa kwe-geoprocessing apho unokufumana ulwakhiwo oluqhelekileyo lolwimi olwaziwayo (ii-loops, iimeko ezithile, njl.njl) kunye nolwakhiwo oluthile lwe-geoprocessing ukwenza imisebenzi ephezulu, amacebo okutshintsha, iinguqu zejometri, njl. ukubandakanya uncedo lomsebenzisi njengoko ubhala imibhalo yakho.
Iplagi epapashiweyo ivumela ukubhekisa kwimithombo yolwazi ekwiprojekthi evulekileyo ngoku kwi-gvSIG Desktop evela kwizikripthi ze-GGL, ngaloo ndlela yenza ukuba i-geoprocessing yedatha efakwe kwi-gvSIG. Ukongeza, iplagin ivumela ukujonga iziphumo kwakhona kwi-gvSIG Desktop ngokuyilayisha kwimbonakalo esebenzayo.
Ukongeza kwi-plugin, uthotho lwee-tutorials kunye namaxwebhu esalathiso aya kuba luncedo ekuqondeni ukuchaneka kolwimi sele enziwe kuye nabani na onomdla.
Uluhlu lokuposa lukwenziwe ukuba lusetyenziselwe ukusombulula nasiphi na isigameko okanye amathandabuzo avelayo ngexesha lokusebenza kwale nkqubo.
Phakathi kwezibonelelo zokusebenzisa ulwimi oluthile lwe-geoprocessing esingabalula:
Indawo esele ikhankanyiweyo yokwakha i-geoprocessing eyakhiweyo: iijometri kwi-WKT, zilungelelanise ukuqhubekeka, abaqhubi abaqhelekileyo be-algebra enxulumene nolwimi abanika ulwimi amandla afanayo kunye ne-SQL yendawo, njl njl.
Uncedo ekudalweni kwezikripthi: Ukuqinisekiswa ngexesha umsebenzisi abhala ngalo, ukuqinisekiswa kobukho bemithombo yolwazi kunye nolwakhiwo lweenkcukacha ezifikelelweyo, ukuzenzekelayo kunye nemimandla yeefayile ezifikelelweyo, njl njl.
Ukuchongwa kwangaphambili kwetekhnoloji: I-GGL yenza ukuba ifumaneke kumsebenzisi uthotho lwemisebenzi esebenzisa ngaphakathi iteknoloji efanelekileyo kakhulu namhlanje: iipersers, ii-API zokufikelela idatha, njl. Itekhnoloji le ikhethwe kwangaphambili ngabaphuhlisi bolwimi kwaye ke luxanduva oluncinci kumsebenzisi, oluchaza kuphela ukusebenza hayi indlela yokuyenza.
Amandla okuphindaphinda i-geoprocesses, wabelane, uxhase, njl.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-AutoCAD zemvume zeMfundo
Post Next Yintoni entsha kwi-MobileMapper Field kunye ne-MobileMapper OfficeOkulandelayo »